Nahoana ianao no tokony hahazo fanamarinana CISSP?
Te-hahazo mari-pankasitrahana CISSP ianao, saingy tsy azonao antoka ny fiantraikany mety amin'ny asa aman-draharahanao? Eny ary! Tonga teo amin'ny toerana mety ianao! Hilaza aminao ny antony lehibe indrindra momba ny antony hahazoanao mari-pankasitrahana CISSP.
Inona ny fanamarinana CISSP?
Nahoana no mahazo mari-pahaizana CISSP?
Inona ny salanisan'ny salanisan'ny CISSP nahazo mari-pahaizana matihanina?
CISSP dia fanafohezana ny Certified Information Systems Security Professional. Ny CISSP dia mari-pahaizana manokana momba ny fiarovana ara-pahasalamana izay natsangan'ny Consortium International Security Systems Certification Consortium (ISC2). ISC2 dia orinasa tsy mitady tombony izay manasokajy ny famaritana ny fenitry ny fiarovana ara-pahasalamana eran-tany. Ny ISC2 dia manohana ny Commonwealth of Knowledge (CBK) ho an'ny fiarovana an-tserasera ary manolotra mari-pankasitrahana hafa amin'ny ankapobeny maneran-tany.
CISSP dia mari-pahaizana amin'ny sehatra avo lenta izay natao ho an'ny matihanina amin'ny sehatra fiarovana matihanina izay manana fahaizana manaporofo amin'ny fitantanana ny filaminam-baovao amin'ny tontolo iainana iray. Ny fanofanana ny fanofanana momba ny fanofanana CISSP avy amin'ny orinasa iray malaza, toy ny ITS Tech School, izay nomen'ny ISC2 azy, dia manome fahafahana bebe kokoa amin'ny fianarana ary hampitombo ny mety ho kandidà amin'ny fanesorana ny fanadinana CISSP.
Misy tombony tsy hita isa amin'ny fahazoana a Fanamarinana CISSP. Eto isika dia hametraka ny antony lehibe indrindra 5 mba hahazoana ny CISSP:
Fanamafisana ny fangatahana ho an'ny mpahay siansa momba ny fiarovana: Maneran-tany, ny tranganà fanitsakitsahana ny filaminam-baovao dia nitarika ny fitomboan'ny fandaminana ara-pitantanana ny filaminan'ny IT. Teti-bola samihafa no alaina indrindra indrindra ho an'ny fiarovana IT, izay midika fa misy fiakaran'ny fampiasam-bola amin'ny mpampiasa ny infosec.
Asa goavana: Ny mpiasan'ny CISSP certified dia manana fahaiza-manao amin'ny fandrafetana ireo karazana fandrahonana isan-karazany sy ny fanafihana maro samihafa, ka mahatonga ny olona ho tena mahay sy mahay. Tsy misy asa mavesatra ho an'ny matihanina toy izany izay afaka mitantana maromaro fiarovana an-tserasera fahaiza-manao, anisan'izany ny Asset Security, Software Security, Network Security, Fitantanana ny zava-mitranga ary ny fahasimban'ny loza.
Manamafy ny fanekena ny fahaiza-manao:Ny CISSP iray manamarina ny olona dia manaiky ny fanekena sy ny fanajany ny fahaiza-manaony sy ny fahalalana azony amin'ny alalan'ny traikefa azo tsapain-tanana ary mahazo mari-pahaizana mariana. Ny fanandramana CISSP dia tsy mora ny mitombo; Na izany aza, rehefa voamarina ary mahazo ny fanamarinana, dia ekena ho fenitra volamena ho an'ny fiarovana ara-pahasalamana eran-tany.
Ny karaman'ny mpiasan'ny CISSP nahazo mari-pankasitrahana, araka ny Global Information Security Workforce Study (2015), dia US $ 103,117.
Ny tombontsoa amin'ny fametrahana fepetra CISSP avy amin'ny orinasam-panjakana tahaka ny ITS Tech School dia manan-danja lavitra noho ny fanahiana sy ny ahiahy mety ho azonao. Raha te-handray ny asanao amin'ny fiarovana ny filaminana amin'ny ambaratonga ambony ianao, dia hanome anao ny elany tokoa ny CISSP!
Related:Nahoana ny orinasa dia mila manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny adiresy CEH Certified?
CEH v10 Inona no vaovao? Voamarina ny Certification Ethical Hacker Certification v10